Raw Finasteride powder (98319-26-7) hplc =98% | AASw sex sex powder
/ Products / Zvepabonde Kuwedzera Mahomoni / Finasteride upfu
Rating: SKU: 98319-26-7. Categories: Prohormone, Zvepabonde Kuwedzera Mahomoni
MUTSVENE unobatanidzwa uye unokwanisa kugadzira kubva ku gram kusvika kuhutano hweFinasteride powder (98319-26-7), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Migumisiro ye Finasteride powder zvakanyatsogadzirirwa kurambidza kuderedzwa kwe testosterone ku dihydrotestosterone iyo inoitika nekuda kwe testosterone hormone inoshandiswa ne-5-alpha reductase enzyme. Migumisiro yeFinasteride yakasimba kwazvo pane data yeprostate yakaratidza kuti mwedzi ye6 yeHedasteride therapy inogona kunyanya kuderedza zvakakwana prostate kuwedzera.
Molecular Kurema: 372.54
Color: Yakachena yehupfu yakasimba
Raw Finasteride powder kushandiswa
Propecia, Proscar, Finasteride poda (CAS 98319-26-7)
Finasteride yaiva yemuromo yakashandiswa. Nokuti BPH inoshandiswa, vanhu vakagadzirira vanomhanya pa 5mg nenguva, kamwe chete pazuva. Kurasikirwa kwemvere dzomurume, 1mg nguva, kamwe chete pazuva.
Finasteride poda (CAS 98319-26-7) inowanzo shivirirwa nevarume vazhinji, asi zvine mwero kune zvakanyanya kukanganisika uyerogenji zvinogoneka nekuda kwekushandisa. Mhedzisiro inowanzoitika yeFinasteride inotenderedza kuita pabonde. Vamwe varume, kunyangwe zvisingawanzoitika vakataura kuratidza gynecomastia zviratidzo, uye mune zvisingawanzoitika zviitiko rashes.
Kunyange zvazvo Finasteride iko kushandiswa kunogona kubatsira panguva yekushandisa vanabolic steroid, ramba uchifunga mupfungwa iyo inoshanda chete kune steroids inokurukurwa pamusoro apa. Uyezve, kushandiswa kweFinsteride pamwe neTesttosterone, Methyltestosterone kana Fluoxymesterone kunogona kuderedza zvakanyanya migumisiro uye kubudirira kwetero steroid. Izvi zvinotungamirira munhu kuti ashandise chete inhibitor apo zvakanyatsodikanwa; kana zvisingaiti, pane chaicho chaicho chisina kukosha mune rake anabolic steroid kushandisa. Inofanirawo kuonekwa, nepo Finasteride isingazovi nehutano pamakemikari eDHT uye inogona kuwedzera uyerogenicity yaNandrolone neTrenbolone, ichave yakanyatsotarisa kusina uyerogenic kuderedza kuitika paBoldenone (Equipoise) uye Methandrostenolone (Dianabol).
Nzira yekutenga Finasteride powder (CAS 98319-26-7) kubva kuAASraw